Sina pp mpamokatra tranom-borona mitafo mitafo fonosana | Sihai
Pp mitazona harafesina tranom-borona dia vita amin'ny alàlan'ny metaly pp, ny tabilao mihantona pp dia rindrina sy sosona ho an'ny tranom-borona fitehirizana, arakaraka ny haben'ny tranom-borona samihafa, ny takelaka fisaka pp dia afaka namboarina habe samy hafa, ny ravina mihosona pp koa mety aforitra, ny rindrina kambana mitafo kofehy pp dia mety tsara hiarovana ny vokatra rehefa mihetsika sy mifandimby. Pp fitoeram-bokatra mitafo sy tranom-borona mitahiry, tranom-boaloboka, tranom-borona feno paingotra, tranom-borona fitehirizam-bokatra, tranom-by, sns., Dia lozisialy fitoeran-javatra mahazatra, izay ampiasaina matetika amin'ny fitehirizana entana mavesatra na be entana ary mihodina mihodina mekanika, mety indrindra amin'ny ny fampiasana indostria toy ny fiara, kojakojan-tokantrano, milina, fitaovana, any Eropa sy Etazonia ary Japon, Taiwan ary ny faritra hafa dia be mpampiasa.
Ny tena fitaovan'ny tranokala fitahirizana pp hollow dia vy tariby vy ambany sy tabilao mitafo. Rehefa foana ny tranom-borona dia azo aforitra sy tehirizina hampiasaina tanteraka ilay toerana. Amin'izao fotoana izao, ny tranom-borona fitehirizana dia feno stackable, azo nakambana ary azo entina, ary nanjary fantsom-pitaovana manara-penitra ho an'ny fivezivezena lozisialy.
Pp Hollow lozisialy fitahirizana tranom-borona:
1. Famaritana mitambatra, fahaizana raikitra, fitahirizana mazava, trano fitahirizana entana mora.
2. Ny forklift, ny fiakarana ary ny crane dia azo ampiasaina hametahana sosona efatra amin'izy samy izy mba hahatsapana fitahirizana telo-refy.
3. Fandidiana tsotra, fampiharana malalaka ary androm-piainana maharitra.
4, ny fampiasana fantsom-by mahery vaika vy, ny faran'ny fanamafisana orina U-fantsona, rafitra mafy orina kokoa.
5. Miaraka amin'ny forklift, trolley, hydraulic pallet truck ary fitaovana hafa, dia azo ampiasaina amin'ny fitaterana, ny fikirakirana, ny fametrahana ary ny famoahana entana, ny fitahirizana ary ny rohy logistika hafa.
6. pp hollow dia ampiasaina ho toy ny liner hisorohana ny famoahana fitaovana madinidinika sy hiarovana ny entana ampidirina.
Previous: pp ravina mihombo miaraka amin'ny eva, epe foam
Manaraka: pp boaty famolavolana mihombo amin'ny endriny